Al-Bashiiri – VILLA PUNTLAND
Home»Entries posted by Al-Bashiiri
Shirkad Caymis oo lagu soo kordhiyey Puntland
By Al-Bashiiri on Oct 15, 2016 PUNTLAND NEWS, WARARKA
Garoowe ( Villa PL ) : Munaasabadan lagu daahfurayay shirka caymiska islaamiga ah oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin ka tirsan Golayaasha Dowladda Puntland wakiilo ka socday shirkada ugu waawayn ee kuyaala degaamada Puntland, iyo qayba badan oo kamid ah bulshada ku dhaqan caasimada Dowladda Puntland. Waaxana ugu horayntii ka warbixin kooban kasoo jeedshay munaasbada […]
Dawladda Puntland oo Galkacayo ku soo bandhigtay cadaymo rasmi ah
By Al-Bashiiri on Oct 12, 2016 PUNTLAND NEWS, WARARKA
Garowe (Villa PL ):- Dowladda Puntland ayaa magaalada Gaalkacyo kusoo bandhigtay askar katirsan ciidanka xooga Soomaaliya oo la doonayay in loo adeegsado colaada magaalada Gaalkacyo. Askartan hadlay waxay sheegeen in ay tiro ahaan ayaa gaarayeen Ciidamada NISA ee la keenay magaalada Galkacayo 240 Askari, oo la safan Milaashiyaadka Galmudug ee Dagaalka kula jira Ciidamada difaaca Puntland […]
Hay’adda FAO oo gaari ku wareejisay wasaaradda xannaanada xoolaha Puntland
Hay’adda cuntada iyo beeraha Adduunka ee FAO ayaa wasaaradda xannaanada xoolaha dowladda Puntland ku wareejisay gaari qorshuhu yahay inloo adeegsado safaradda wasaaradda ee tallaalka iyo dawaynta xoolaha. Gaarigan oo noociisu yahay HARDTOP ayaa dabooli doona baahi wasaaraddu u qabtay safaarada deegaannada laamiga ka baxsan. waxana uu ka qayb-qaadanaya dar-dargelinta tallaalka iyo dawaynta xoolaha oo wasaaraddu […]
Daawo Muuqaal qurxoon oo Wasiiradda Haweenku ay ka samaysay Maalinta Gabdhaha Aduunka
Garoowe ( Villa PL ) : kadib Munaasabado kala duwan oo soconaayey Todabaadkii lasoo dhaafay waxay Wasaaradda Hormarinta Haweenka iyo Ariimaha Qoyska Puntland soo gaba gabaysay Todobadka Caalamiga ah ee Gabdhaha . Munaasabad si wayn loosoo Agaasimay oo Garoowe ka dhacday ayaa lagu soo bandhigay Dhibaatooyinka ku xeeran Gabdhaha gaar ahaan dhanka Wax-barashada, iyadoo Masuuliyiinta […]
Wafdi ka socda Puntland oo Nayroobi kaga qaybgalaaya Shirar ku saabsan Caafimaadka
Wafti uu hogaaminayo Wasiirka Caafimaadka Dowlada Puntland Dr Cabdinaasir Cismaan Cuuke ayaa shir ku saabsan Caafimaadka Soomaaliya kaga qeyb galaya Magaalada Nayroobi ee xarunta Dalka Kenya. Waftiga ka socda Dowlada Puntland ee ka qeyb galayaa Nayroobi ayaa ka mid ah Madax ka shaqaysa Caafimaadka oo ka socota guud ahaan dalka Soomaaliya,Hay,addaha Qaramada Midoobay,Deeq bixiyaasha iyo Ururo […]
Puntland oo diyaarinaysa qorshayaal lagu wajahaayo Abaaraha iyo Biyo la’aanta
Garoowe ( Villa PL ) : Wasaaradda Qorshaynta iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Puntland waxaa lagu qabtay shir wayne ay isku yimaadeen Hay’adaha Dawliga ah ee Puntland ee ka shaqeeya Faya Dhawrka iyo Biyaha . Wasaaradaha Caafimaadka iyo Waxbarashada ayaa qayb ka ahaa kulaan sidoo kale Hay’adda Puntland u qaabilsan Masiibooyinka Dabiciiga ah ee HADMA iyo […]
Mashruuc lagaga hirgalinaayo Puntland goobo waxbarasho oo si rasmi ah u biloowday
By Al-Bashiiri on Oct 11, 2016 PUNTLAND NEWS, WARARKA
Garoowe ( Villa PL ) : Masuuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee DPL ayaa Magalada Garowe ka dhagax dhigay Dugsi Dhexe iyo Sare oo ay Wasaaraddu dhiseyso. Dugsigan ayaa qeyb ka ah Mashruuc lagu dhisayo Schoolo dhowra ah islamarkaana lagu dayactirayo laguna balaarinayo kuwa kale. Mashruuca waxbarashadu waa iftiin qeybtiisa dugsiyada sare waxaa loogu […]
Wasiiro ka tirsan Dawladda Puntland iyo Hay’adda la dagaalanka Musuq maasuqa oo yeeshay kulan xasaasi ah
Garoowe ( Villa PL ) : Hay’adda Astaynta maamul wanaagga iyo la dagaallanka Musuq-maasuqa Puntland ayaa soo bandhigtay qorshaheeda wax-qabad ee sanadaha soo socda, waxaana madasha qorshe howleedka lagu soo bandhigay ka qayb-galay wasiirro dowladda ah iyo xubno ka socday qaybaha bulshada- Qorsha howleedka wax-qabad ee sadexda sano soo socda ayey Hay’addu madasha ku bidhaamisay […]
AMTEL oo ku soo biirtay Galkacayo iyo guud ahaan Puntland .!
Galkacayo ( Villa PL ) Shirkadda ka shaqaysa arrimaha isgaarsiinta ( Teleefanada iyo inter-netka ) ayaa lagu soo bandhigay Magaalada Galkacayo ee Xarunta Gobolka Mudug . Shirkadaan ayaa la magac baxda AMTEL waxaana la sheegay in ay ku baxayso lacag gaaraysa 18 Malyan oo doolarka Maraykanka ah . Maal galinta Shirkaddan Isgaarsiinta ah eek u […]
Puntland oo gaadiid u kala dirtay dhamaan Degmooyinka ..!
Boosaaso ( Villa PL ) : Wasaaradda Arimaha gudaha DPL ayaa dhammaan Gobolada PL u kala dirtay Gaadiid sida raashiin gargaar ah oo loogu talagalay Qoysaska Danyarta ah ee waxyeeladu ay ka soo gaartay Abaaraha ka jira Deegaanada Puntland . Wariyaasha ku sugan Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka bari oo ah barta uu ku soo […]
Haweenka Puntland oo ka hadalay qaybta ay ku leeyihiin Aqalka sare ee Somaliya
By Al-Bashiiri on Oct 10, 2016 PUNTLAND NEWS, Uncategorized, WARARKA
Haweenka soomaliyeed gaar ahaan siyaasiynta ku sugan puntland ayaa baaq ka soo saaray soo xulida xubnaha aqalka sare iyo qaabka aysan u dhicin in sidii lagu heshiiayay ee ahayd inay wada tartamaan haween oo kaliya aysan jirin. Masuuliyiinta wasarada haweenka xubo u sharaxan labada aqal ee baarlamanka somaliya iyo masuuliyiin kale oo kamid ah haldoorka […]
Wasaarda Waxbarashada Dowladda Puntland oo gu’aamo cusub soo saartay
Dawladda Puntland, gaar ahaana Wasaaradda Waxbarashada & Tacliinta Sare ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay xiri doonto Xarumaha Waxbarashada ee aan ka diwaangashayen Wasaaradda Waxbarashada. Agaasimaha guud ee Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee dowlada Puntland Maxamed Cabdulqaadir Cismaan ayaa sheegay Iskuulada aan ka diwaan gashneyn wasaarada ay yihiin kuwo sharci daro ah […]
Wasaaradda Amniga Puntland oo qalab xafiiseed ku wareejisay Booliska Gobolka Sanaag (Sawirro)
By Al-Bashiiri on Oct 9, 2016 PUNTLAND NEWS, WARARKA
Qalabka oo isugu jira agabka xafiisyada iyo qalabka loo adeegsado xirista dadka denbiyada gala ayaa waxaa taliska ciidanka Booliska gobolka Sanaag ee fadhigiisu yahay magaalada Badhan ku wareeriyey Huruuse Cabdiraxmaan Aadan oo ah agaasimaha waaxda qorshaynta ee wasaaradda Amniga Puntland, waxaana kala wareegay agabkan taliyaha qaybta Booliska gobolka Sanaag Cabdirisaaq Faarax Warsame. Agabkan ayaa qayb-ka […]
Degmada Waaciye ee gobolka Karkaar oo gole deegaan yeelatay (Sawirro)
Wasaaradda arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo horumarinta reer Miyiga dowladda Puntland ayaa ku guulaysatay dhismaha golaha deegaanka degmada Waaciye ee gobolka Karkaar oo muddooyinkii danbe dib u dhac ku yimid kadib markii bulshada deegaanku isku khilaafeen dhismaha golaha. 16-kamid ah xubnaha golaha deegaanka degmadaasi ayaa cod gacan taag ah ku doortay guddoomiyaha dowladda hoose ee […]
Wasaaradda Waxbarashada oo qiimayn ku samaysay goobo wax barasho oo ku yaala Gobolada Nugaal iyo Mudug
Garoowe ( Villa PL ) : Wasaaradda waxbaarashada Puntland ayaa Kormeero ku Sameeysay Xarumaha Waxbarashada Degmada Burinle iyo deegaana hoos yimaada . Wafdi balaaran oo uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaarada waxbarashada dowlada Puntland mudane Maxamed C/qaadir ayaa kormeero ku sameeyay dhismayaasha iyo dayac tirada ay hay’ada save children horey uga fulisay Dugsiyada Degmada iyo […]